Doorkii iyo daahfurkii buuga Hal Aan Tebayey ee Ceerigaabo
Shalay 5th-03-09 waxaa gole il-yartu isqabatay loogu kulmay xarunta dugsiga sare ee Xaaji Aadan halkaas oo lagu qabtay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay, madashaas oo lagu gardaadinayey daahfurna u ahayd baal taariikheedkii, suugaantii iyo gabayadii Xaaji Aadan Afqalooc Alle ha u naxariistee (1871 – 1986) ee uu qoray qoraaga caanka ah ee Maxamed Baashe X. Xasan. Xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay iskuna soo duba rideen aqoonyahano, suugaanyahano iyo maamulka dugsiga sare ee Xaaji Aadam. Kulankan oo ay isug yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan dhalinyaro ayni kastaba leh, odayaal iyo cuqaal intooda badani ahayd dad Xaajiga ka ag dhowaa afkiisa wax badana uga soo joogay, wadxaa kale oon iyana ka maqnayn qaybaha haweenka, aqoonyahanada, culimadaba.
Sadexdaa wakhtaa xaal adduun lagu sifeeyaa’e
Soo noqod ma jirtiyo shalay wixii saatufoo tegaye
Waxay taladu kuu suuban tahay subaxa aad joogto
Hadaba haddii Xaajigu uu maalmaha ku kala soocay tagto iyo timaado iyo tu’ markaa la joogo maxaa subaxaa ka suntamay madasha? Si kastaba ha ahaatee, subaxba nasiiblehe waxaa nasiib u yeeshay in ay codkooda ka dhiibtaan gaadhsiiyaana martidii ka soo qayb gashay madashaas furitaanka dib, waxaa erayo kooban ka yiri ururiye suugaaneed iyo dhaqanyahan Abokor Xasan Nuur ahaana xidhiidhiyihii kulankaas, intaas ka dib waxaa codbaahiyaha lagu soo dhoweeyey Faysal Faash oo si xeel dheer uga waramay baalasha kala duwan ee buuga haday tahay; hanaqaadkii Xaajiga iyo noloshii qurbaawinimadiisi, soo noqodkiisi iyo halkankii xornimo doonka iyo dawladihii rayidka & kacaankii Oktoobar, isagoo si mug iyo miisaan leh u falanqeeyey una faaqiday .
Waxaa isna martidii ka soo qaybgalayaasha ahayd codkiisa ku doogsiiyey maskaxda iyo maanka u hilowsanaa suugaantii iyo taariikhdii Xaajiga Xildhibaan hore Axmed Cabdilaahi Cali Bahal oo erayo kooban oo kor ka xaadis ka jeediyey madasha iagoo xusayna in Xaajigu shakhsiyad tusaale fiican u ah wanaaga ahaa.
Waxaa hal-doorba uu eraygiisa ka yiri buuga Hal Aan Tebayey waxaa iyana madasha laga maalay gabayadii Xaajiga oo uu Maxamed Cabdilaahi ku deeqsiiyey laabaha u boholyowsanaa gabayadii Xaajiga iyadoo gabayadu ay ahaayeen kuwo ruxa quluubta xasiloon ee ka soo qayb-galayaasha gelisayna neecaw kalgacal oo ay ku jeclaayeen inay dhegahoodu markasta gabayadaasi maqlaan. Ku darsoo waxaa maax kastoo ka timaada hal-doorada eraygooda ka yidhi madashaas ay waraab u ahayd maskaxta u abaarsanayd waxaana si cod karnimo ah u soo bandhigtay miidii iyo heenkii dhaxalkii Xaajiga Marwo Faadumo Xaaji Xasan iyadoo iyana dhankeeda qirtay in Xaajigu ahaa hiboole cod kar ahaa dhif iyo naadirna lagu arko bulshada. Sida hirarka badu isu galaan xili roobaadka ayaa maanka maskaxda waxaa isu gelayey isuna dhaafayey hantiyeyna xogta ku duugan Hal Aan Tebayey ay ku afgobaad sadeen Siciid Ducaale Xirsi iyo Siciid Aw Nuux.
Ugu danbayntii waxaa mahadnaq loogu soo jeediyey qoraaga Maxamed Baashe qalinkiisa uu u hibeeyey inuu soo if baxo buuga Hal Aan tebayey oon oran karno waaba hal aynu wada tabayney dhamaanteenba, iyadoo magac iyo maamuus lama ilaawaana loogu hayo qoraaga.
Isku soo wada duuboo waxaa si milge ah lagu gudoonsiiyey buugta qaar ka mid ah martida munaasibaas joogtey iyadoo buugaasna uu iminka hor yaalo dhaayaha akhristayaasha Sanaag.
Mahad Axmed Xaaji Adam Afqallooc